बहस : श्रीमतीले श्रीमानको खुट्टा किन ढोक्छन् ? — News of The World
सन्तोष न्यौपाने, बेल्जियमभाद्र २९, २०७५
‘लोग्नेको गोडा ढोग्न नछाड्नु है नेपाली हिन्दु महिलाहरुले ,दर खानु अघि ।।’
‘बेल्जियमका हिन्दू नारीज्यूहरुमा ब्यापक क्रान्ती भएकाले गोडा ढोग्दैनन अरे ।’
शेर बहादुर छन्त्याल
मेरा मित्र मेख गुरुङले फेसबुकमा राख्नु भएको स्टाटस र त्यसमा मित्र छन्त्यालले दिएको प्रतिक्रिया हो यो। यो विचार आफैमा संदेश मुलक छ भने व्यंगात्मक पनि उत्तिकै देखिन्छ। जे भएपनी यो विषयमा बहस हुनुपर्दछ भन्ने सोचेर आज यो विषयमा कलम चलाउँदै छु। यसमा व्यक्त विचार मेरा निजी हुन्। सहमत हुने वा नहुने पाठकको आफ्नो अधिकार पर्दछन्।
विगत केही समय अगाडि नेता माधव कुमार नेपालले उहाँको धर्मपत्नी ले ढोगेको फोटो भाइरल भएको थियो।र त्यसमा कम्युनिस्ट लगायत धार्मिक कुराहरूमा आफ्ना विचार पोखिएका थिए।बेला बेलामा हुने यस्ता बहस बिना निष्कर्षमा पुग्ने गरेका छन्। केवल कुनै जातिय रुपमा त कुनै धार्मिक रूपमा बहसका विषय बनेका छन्।
वैज्ञानिक आधारमा जाने हो भने ढोग गर्नु फाइदाजनक छ।हाम्रो शरीरको शिर बाट सुरु हुने कोशिकाहरू हातको औंला र खुट्टाको औंलामा गएर समाप्ति हुन्छन्। ढोग्दा शरीरमा एक प्रकारको सर्किट तुरुन्तै बन्छ र दुई शरीरको ऊर्जा जोडिन पुग्दछ। जसको फाइदा दिल र दिमागमा पर्दछ।अर्थात् सकारत्मक ऊर्जा ले व्यक्तिमा भएको अहंकार क्रोध लगायतका खराब तत्व नष्ट गर्दछ।जसले गर्दा सम्बन्ध समुढुर बन्दै जान्छ भने माया प्रेम शशक्त बन्दछ।
अब लागौं धार्मिक मान्यता तर्फ। धार्मिक अनुसार श्रीमतीको हातमा बृहस्पति ग्रहले आसन गरेको हुन्छ भने श्रीमानको खुट्टामा सनी ग्रह आसन रहेको हुन्छ।ढोग गर्दा श्रीमतीको हातले खुट्टालाई स्पर्श गर्दै शिरले ढोग्ने कार्य हुदछ।यसो गर्दा सनी ग्रह खुसी बन्दछन् । अर्थात् बृहस्पति सनिको पाउमा आसीन हुन्छ।जसको नतिजा साकारत्मक मानिन्छ। परिवारमा खुसी,लक्ष्मी वृद्धि,लगायतका फल मिल्दछ । तर लोग्नेले श्रीमतीको गोडा ढोगेमा ठीक उल्टो नतिजा प्राप्त हुने बताइएको छ।
अब दुबै तर्फबाट चर्चा गरिसकेपछि श्रीमतीले श्रीमानको गोडा ढोक्ने की नढोक्ने रुढोग्ने किन ? नढोग्ने किन ? भन्ने तर्फ लागौं।यसमा तर्क आफ्नै होलान्। तर म यसलाई नितान्त व्यक्तिगत मान्दछु। धार्मिक हिसाबले जोडिएको हुँदा पनि यो धार्मिक मान्यतामा रहनुपर्दछ।
मेरी आमाले हरेक तीजमा बुवाको गोडा ढोग्नुहुन्छ।उहाको दिल खुस हुन्छ।बिहे पछिका दिनहरु उहाले यसै गरेर वर्त बस्नुहुन्छ गोडा ढोग्नुहुन्छ।उहाको लागि यो बाध्यता होइन आफूले नै भित्री दिल बात चाहेर गर्नुभएको छ। आमा मात्रै मेरी श्रीमती पनि तीजको दिन वर्त बस्छिन् मेरो गोडा ढोग्छिन्। म उनलाई बर्त बस्नको लागि बाध्यात्मक परिस्थिति गराइदिन किनकि उनको दिल टुटाउन मेरो दिलले दिँदैन। ढोग गर्नु वैज्ञानिक हिसाबले पनि जायज भएकोले मैले कुनै रोकतोक गर्दिन।किनकि छोरीको गोडा मा पनि ढोग्छु, मातापिताको गोडा म पनि ढोग्छु। यो मेरो आफ्नो निजी र धार्मिक आस्था संग जोडिएको कुरा हो।
धेरै दिदी बहिनी आमाहरूले तीजमा आफ्नो श्रीमानको सु स्वास्थ्य को लागि कामना गर्दै बर्त बस्नुहुन्छ। पूजा गर्नुहुन्छ।गोडा ढोग्नुहुन्छ। यो बाध्यता होइन। रहर हो।हामी कसैको रहरालाई अपेक्षा गर्न सक्दैनौं। र गर्नु पनि हुँदैन। उहाँहरूको त्यो रहर र चलिआएको चलनलाई हस्तक्षेप गर्नु औचित्यहीन है हुनेछ।
अर्कोतर्फ आज समय दिनानुदिन आधुनिक रुपमा गएको छ। समयसँगै लोग्नेको गोडा नढोग्ने श्रीमतीहरु पनि छन्। कोही आफूलाई परिवर्तन गर्न चाहन्छन् भने कोही यसो गर्नु ठीक नहुने ठान्छन् । यसो भन्दै गर्दा उनीहरुलाई गलत भन्न मिल्दैन। त्यो उनीहरूको अधिकार हो। उनीहरूको श्रीमानले पनि ढोग्नै पर्दछ भनेर बाध्यतामा पक्का पनि पार्ने छैनन।भने पार्नुपनी हुँदैन। जसले सम्बन्ध समुढुर भैरहोस्।
समय परिवर्तन भएपनि हाम्रो संस्कृति हामीले चाहेर पनि परिवर्तन गर्न गार्हो हुन्छ।मिल्नसक्ने जाती गर्नु पनि पर्दछ। तर त्यो गर्दागर्दै वैज्ञानिक कारण पनि औँल्याए झन् उत्तम हुन्छ। तसर्थ यो एक आपसमा सम्बन्ध रसिलो कसिलो बनाउनको लागि स्वच्छ विचार पोखौ ।समाज व्यक्ति रुपान्तरण को लागि सबै पक्षको ख्याल हुनु जरुरी पर्दछ।
अष्ट्रेलियामा ज्यान गुमाएकी निश्माका पतिले लेखे यस्तो भावुक पत्र
बैंकहरुले कमाएको मात्रै देख्ने तर यसभित्रको समस्या कसले बुझ्ने ?
विप्लव कामरेड तपाईँको माग के हो ?
यस्तो छ रुसमा बिहे परम्परा